Izatifikethi kunye nembeko
BS Isigaba esinye
I-DIN Rail single Phase
BS Isigaba esithathu
I-AMI Smart Meter
Imitha yentlawulo kwangaphambili
Iziseko zophuhliso lweMetering Advanced (AMI)
N + Izisombululo
Uphuhliso lweProjekthi kunye neZimali
N + isisombululo esinye kuyo yonke
Isisombululo sokuLawulwa kokuSebenza koMbane
Iindleko ze-Smart Metering kuMbindi Mpuma
IZityalo zeLinyang PV eTshayina
INkqubo eHlangeneyo yeeNkonzo zaMandla zeZhangshi Highway
Iimitha ze-Smart kunye neMveliso yesiphelo
Iimveliso zoluhlu lweemodyuli zeSolar PV
I-Jiangsu Linyang Energy Co, Ltd yasekwa ngo-1995 eQidong, e-China inemali ebhalisiweyo eyi- $ 270 yezigidi kunye nembono yokudala indima ebalulekileyo kwimveliso yolawulo lwamandla kunye nokuphehla amandla ombane. Siqhubekile nembali yethu yempumelelo kwimarike yamandla yasekhaya nakwamanye amazwe ngokuxhasa ngaphezulu kwe-150, ngaphezu kwe-550 yamalungu eqela le-R&D kunye ne-Smart Grid kunye neeSmart Marketing Solutions.
Sineqela lobuchwephesha elomeleleyo le-R & D, eqinisekisa uphuhliso lwetekhnoloji ephezulu yeemveliso zethu kwaye zikhokelela ngokupheleleyo kubathengi. Kwaye sikwanalo neqela lenkonzo emva kokuthengisa elungiselelwe abathengi bethu.
Saziwa kwihlabathi liphela ngeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu. Ngothotho lwenkqubo yolawulo lomgangatho olungqingqwa ukusuka kuvavanyo lweelebhu ukuya kwimveliso yomzi-mveliso, siyaqinisekisa ngokupheleleyo ukuba zonke iimveliso zethu ziyahlangabezana ngokugqibeleleyo nemigangatho eyimfuneko yamashishini.
Ngabasebenzi abangaphezu kwama-3000 kunye neemitha ezingama-70,000 zemitha yokuqokelelana kunye nocweyo lokulinganisa oluqhutywa ngezixhobo ezihambele phambili kwihlabathi, amandla ethu emveliso anokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zentengiso yasekhaya nangaphesheya.
Iindaba kunye neMicimbi
Umzi mveliso: Hayi. 666 Linyang Road, Qidong, kwiPhondo i-Jiangsu 226299, China
Ikomkhulu: 18F, isakhiwo 1, Zhengda Wudaokou Plaza, Nombolo 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, China
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Tips - Hot Products - eKhaya
Single Phase Smart Energy Meter , beSigaba Single Bhatala Energy Meter , iMitha yeSigaba esinye sokuLungiselela , Single Phase zhong Meter , Single Phase Electric Meter , isiGaba Meter Single ,
Ngolwazi oluthe kratya
Ukuba ufuna ukufumana ulwazi lwamva nje, nceda uzalise le fomu ingezantsi.
Nceda ugcwalise umhlaba ofunwayo.